Record Music Site Radio na-iPhone / iPad / iPod
Record Music Site Rdio / Radio na-iPhone / iPad / iPod
The nnọọ ihe mbụ bụ idekọ music si Radio ma ọ bụ Rdio na n'ihi na nke a, i nwere ike na-eso nzọụkwụ si guide- Site Radio / Rdio ka iTunes
Nzọụkwụ 2. Find songs na dekọrọ
Ozugbo songs si Radio ma ọ bụ Rdio na-dekọrọ na gị iTunes Ọbá akwụkwọ, ha ga-ahụ anya n'okpuru ndepụta "Kọrọ" n'okpuru iTunes n'ọbá akwụkwọ na n'aka ekpe nke menu.
Si dị ndepụta, họrọ songs na ị chọrọ nyefee gị iPhone / iPad / iPod ngwaọrụ. (Nseta ihuenyo egosi Track 3 ka họrọ song)
Nzọụkwụ 3. jikọọ iPhone / iPad / iPod
Ugbu a ị chọrọ jikọọ gị iOS ngwaọrụ nke ị na-achọ ka nyefee music. Were a USB na jikọọ na otu njedebe USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke PC na ndị ọzọ na ọgwụgwụ gị iOS ngwaọrụ. The ngwaọrụ aha ga-apụta n'okpuru "Ngwaọrụ" nhọrọ na n'aka ekpe menu. (Nseta ihuenyo egosi Yuki si iPhone dị ka ejikọrọ iOS ngwaọrụ)
Nzọụkwụ 4. nri pịa "Kọrọ"
Ugbu a ọzọ gaa "Kọrọ" nhọrọ nke n'akụkụ aka ekpe menu na nri pịa ya. A ndepụta nke wedaa menu ga-apụta na site na nke a họrọ, "Export Iji" nhọrọ na mgbe ahụ lekwasịrị iOS ngwaọrụ nke songs kwesịrị ka a dere. (Nseta ihuenyo egosi Yuki si iPhone dị ka họrọ iche ngwaọrụ)
On ọma ndekọ, na songs ga-apụta na listi "Music" n'okpuru ngwaọrụ aha na n'aka ekpe menu.
Ọzọ: Record Music Site Radio ka akporo ekwentị